MUSQULAHA GIRIIGGA: NOOCYADA IYO SHARAXAADDA - MUSHROOMS
Ereyga "gruzd" ee tarjumaadda ka timaada Church Slavonic macnaheedu waa "cidhib".
Wali lama yaabin in ay magacaas ku soo iibsadeen.
Waqtiyadii hore ee Ruushka, dadka soo iibsada musqulaha ayaa soo ururiyay baabuurtooda oo cusbaynaya foosto.
Dhammaan noocyada isdhexgalka waxay midoobaan sifooyinka guud: Qalabka isku dhafka ah ee daboolka ayaa la arkaa, qaabkuna wuxuu isbeddelayaa koritaanka fungus - marka hore waa miisaan iyo ka dibna hindhisada qaabka geesaha hoos u dhacaya.
Waxay ka tirsan yihiin fangaska. Taargooyadu waxay noqon karaan midabyo kala duwan, waxay kuxirantahay nooca, oo lugta u tag. Dhammaan noocyada digirta mooraha waxay ku midoobaan caanaha Mlechnik (latarius) ee qoyska Syrupage (lat. Russulaceae).
Ma taqaanaa? 32.2% borotiinka ayaa ku jira caano caanaha qalalan - taasi way ka badan tahay hilibka. Laakiin foomka qalajiyey, boqoshaada caanaha aan loo isticmaalin sababtoo ah qadhaadh ee casiir caan ah.
Qadada dhabta (Lactarius resimus)
Sanadkii 1942, Boris Vasilkov oo ah cilmi-baaris ku takhasusey maadada 'salmon', ayaa ka soo baxday noocyada salmon, isaga oo sharraxaad ka bixiyey, waxaana loo yaqaan 'salmon white' mushahaarka dhabta ah, sababtoo ah waxaa loo arkaa dadka. Inkastoo ilaa waqtigan, basbaaska basbaas la yiraahdo hadda.
Waxay ku koraan gobolka Volga, ee Ural, Siberia. Koofiyada dhexroorka ah ee 6-25 cm, caddaan ama huruud ah, xoogaa dhegaysan. Qaabkeeduna waa isbedelayaa, hoosna waa taarikada cad. Cirbadaha daboolka waxaa lagu dabooli karaa fluff, taas oo ah nooca noocan ah ee ugu muhiimsan.
Lugta 3-9 cm sare, cylindrical, cad ama huruud ah, faaruq ah dhexda. Jirka jirka fangaska waa caddaan, oo leh casiir caan ah xilliga nasashada, kaas oo midabkiisa u beddela midab huruud ah marka uu la falgalo hawada. Kaxulku wuxuu aad u la mid yahay dhadhanka miro. Dalagyada laga soo goosto Luulyo ilaa dhammaadkii Sebtembar ee kaymaha qallafsan iyo isku dhafan ee agagaarka geedaha cawska.
In Russia, boqoshaada caddaan loo tixgeliyaa boqorka boqoshaada oo la cuno, Western Europe waxaa loo arkaa aan la dabooli karin. Tan iyo juice caan ku leedahay dhadhan qadhaadh, waxaa lagu qooyay ka hor karinta, la karkariyey muddo dheer, ka dib markii taas oo waxay qaadataa on buluug buluug ah.
Daawada dadweynaha, caanaha dhabta ah waxaa loo adeegsadaa daaweynta urolithiasis iyo kelyaha kalyaha.
Iskuday jaale (Lactarius scrobiculatus)
Waxay tilmaamaysaa noocyada caanaha ah ee la cuni karo. Waxay ku koraan kaymaha ama xayawaanka bjørk ee Eurasia oo leh cimilada diiran.
Koofiyadu waa 6-28 cm dhexroor, dahab dahabi ah, siman. Qaabka ujirku wuxuu isbeddelaa marka uu korayo. Taarbo leh dhibco madow ayaa lagu dhejin karaa dhinaca hoose. Lugta ayaa kor u kacda ilaa 12 cm, oo leh jajabyo jaale dhalaalaya oo xoog leh, xoog leh, dhajisan, inkastoo gudaha gudaha waa mid madhan. Saxarka fangaska waa caddaan, laakiin wuxuu jeexjeexayaa huruud. Khudaarta caanaha oo kale ayaa sidoo kale ah mid caan ku ah. Karaashu way daciif tahay laakiin way fiicantahay. Prefers si ay u koraan on carradu limestone.
Waxaa la cunaa kadib markaad barareyso iyo karkarin. Wixii daaweyn ah ee daawada dadweynaha waxaa loo isticmaalaa qaab decoction ah ee cholelithiasis.
Waa muhiim! Maydhis waxay u sameysaa mycorrhiza bjørk, taas oo ay ka heshay biyo iyo macdano badan, waxayna ka timaadaa carbohydrateska geedaha, amino acids iyo phytohormones.
Gawaarida (Lactarius piperatus)
Daawooyinka badanaa waxay ka heleen boqoshaada meel dhexdhexaad ah iyo keynta-laabba ee Ruushka.
Basbaaska basbaaska ayaa ilaaliya dhammaan sifooyinka guud ee culayska, laakiin wuxuu leeyahay sifooyin noocaas ah. Koofiyadu waa 6-18 cm dhexroor, creamy-white, mararka qaarkood waxay ku daboolaan dhibco guduudan. Xaruntu waxay leedahay dusha sare, laakiin ma lahan siddooyin isku dhafan. Jidhku waa caddaan, cufan, jeexjeexa wuxuu sii deynayaa dheecaanka caanaha ah, oo, marka uu la falgalo hawada, wuxuu noqonayaa mid cagaar ah-cagaar, iyo saxarka ayaa noqda buluug-buluug.
Dhadhanka ah ee boqoshaada basbaas oo basbaas, iyo urta waxay la mid tahay rootiga galley. Lugaha ilaa 8 cm, cad, cufan leh dusha wax yar yar. Markaad korto waxaa laga helaa cagaaran ama casaan ah. Qeybta hoose, taargadu waa cidhiidhi, hoos u dhaadhaca lugta oo ah midab cad, midab leh. Haddii taargooyinku waxyeeleeyaan, waxay ku daboolaan dhibco huruud ah.
Basbaasku wuxuu ku koraa kaymaha daadiinka ah ama isku dhafan laga bilaabo Julaay ilaa Oktoobar waxaana uu ku samaysan yahay mycosis oo leh geedo, xashiish iyo dhir. Mushrooms waxaa loo isticmaalaa salting, pickling, ama foomka la qalajiyey halkii basbaaska.
Noocaan waxaa loo isticmaalaa daawooyinka dadweynaha ee daaweynta cudurka kelyaha, cudurada gallstone, tuberculosis, iyo weliba, conjunctivitis. Casiirka casiirka ka saar boogaha.
Noocyadaas waxaa kale oo loo yaqaannaa muraayada maryaha ama aspirta. Wuxuu ku koraa aagaha diiran ee aagga cimilada ee cimilada. Ruushka, waxay si wayn u heleen gobolka gobolka ee gobolka Volga.
Wuxuu cadeeyaa inuu yahay mid la cuni karo sababtoo ah joogitaanka cabitaanka caanaha. Tilmaanta midhuhu wuxuu la mid yahay kan hadda, laakiin waxaa lagu kala saaraa joogitaanka daboolka dhibcaha caanaha leh ee cas iyo caarada cas ee hoos yimaada. Casiirka casiirka waa cadaan badan oo qoyan, ma badalo midabka fasax.
Magaca magiciisa waxaa laga helaa deegaankiisa - kalluunka cagaarka iyo caanaha. Xayawaankani waa ka weyn yahay kuwa kale, koofiyaddoodu waxay kori kartaa ilaa 30 cm dhexroor. Waxaa lagu qiimeeyaa mid ka yar caanjugta caanaha oo cad iyo huruud ah, laakiin caan ku ah biqilka weyn.
Kalluumeysiga Gruzdya wuxuu ku dhacaa dhulka hoostiisa, sidaa daraadeed koofiyadu had iyo jeer waa wax badan oo wasakh ah. Forms mycorrhiza leh sirow, aspen, macaan. Beergoosku wuxuu ka dhacaa dhammaadka Agoosto ilaa horraanta Oktoobar. Pulp gruzdya aspen cad, jilicsan, cufan leh ur ah miro jilicsan. Isticmaal aragtidan kaliya ee la qaado.
Qaybta pinge (Lactarius pergamenus)
Noocyadaasi waxay ka mid yihiin boqoshaada xaalad ahaan la cuni karo. Wuxuu ku koraa kaymaha isku dhafan ee kooxo badan.
Daboolka xajinta ayaa ilaa 10 cm dhexdhexaad ah, wuxuu leeyahay midab caddaan ah, kaas oo isbeddelaya huruud ahaan iyadoo koritaanka fungus, dusha sare ujoogsan yahay, waxay noqon kartaa mid sahlan. Wuxuu keydiyaa dhamaan sifooyinka qaabka loo yaqaan 'loading'. Saxarka ee fangaska waa caddaan leh dheecaan caano ah oo aan badalin midabka marka jabiyo. Qeybta hoose ee jaalaha ah midabka jaalaha ah. Lugta oo cidhiidhi gaaban, dheer, cad.
Waxay u egtahay mid la mid ah culeyska loo yaqaan 'transverse load', laakiin wuxuu leeyahay dabeecad sarreysa iyo dabool yar. Isu-ururinta waxaa la qabtaa bilaha 8aad-9aad. Waxaa loo isticmaalaa salping leh pre-soaking.
Si aad uhesho kooxda cufan cad waxay qaadaan jilbaaxo nacas ah, sida jilbillada. Xayawaankani waxay ku koraan kaymaha qallafsan ee Eurasia. Muujinta noocyada ayaa ah joogitaanka dhibco huruud ah oo caarada korka ku yaalla. Dhamaan sharaxaada kale waa isku mid.
Maqaarka caanaha ee Gruzdya ayaa si deg-deg ah ugu foorarsatay nasasho iyo cagaar yar. Tani waxay u egtahay in ay u egtahay basbaaska. Farqiga u dhexeeya noocyada noocan ah ee loogu talagalay soo qaadashada musqusha maaha mid dhab ah. Noocyadaas oo dhan, inkastoo la mid ah, laakiin sidoo kale waxaa ka mid ah si ay u noqdaan boqoshaimo xaalad caan ah. Noocyada noocan ah ee dabiiciga ah ma laha laba mataano.
Qalabka mircosis oo keliya oo leh geedo dardar leh. Dalagga ayaa laga soo goostay bilihii Julaay ilaa Sebtembar. Markaad wax karisid, u isticmaal kaliya kaliya qaadashada.
Waa muhiim! Sababtoo ah casiirka caanaha iyo qadhaadhka caanaha, boqoshaada caanaha ayaa si dhif ah u saameeya cayayaanka. Si aad uga takhalusto qadhaadhkeeda, boqoshaada caanaha waa in lagu qooyay: digir caano cad - maalin, madow - dhawr maalmood. Biyaha ayaa la beddelaa saddex jeer maalintii waxayna ku darayaan milix.
Qoorta Lactarius Black
Mushaqa geedka madow waxa loola jeedaa xaalad ahaan la cuno. Tilmaanta calaamadaha dibadda waa sida dhammaan wiilasha.
Kabka cabbirkiisu wuxuu noqon karaa ilaa 20 cm olive mugdi ah ama madow midab madow oo leh madadaalo ee bartamaha. Jidhku waa cufan, caddaan, jilicsan, wuxuu midabkiisa u beddelaa cawlaan marka jabsan. Casiirka casaanka waa kaneecada, baaxad weyn. Lugta waa midab isku mid ah oo leh fur.
Fungus waxay samaysaa mycorrhiza bjørk oo ku kora kaymaha isku dhafan. Goynta laga bilaabo Julaay ilaa Oktoobar. Waxaa loo isticmaalaa salting, helitaanka midab-dhadhan-burgundy.
Noocyadaasi waxay sidoo kale heleen magaca gumaadka eeyga ama jilicsanaan jaale ah oo dahab ah. Lagu kala qaybiyay aagga dabiiciga ah iyo kaniisadda ee Ruushka ee kaymaha daadsan iyo isku dhafan.
Koofiyadu waa 7-20 cm dhexroor, dhumuc, jaalle ah oo midab leh oo leh jilbaha jilicsan ee daciifka ah, shaggy ee geesaha. Jidhku waa caddaan, cufan, casiir khafiif ah oo hawada ka soo baxa ayaa soo gashaa midab khafiif ah, laakiin ma aha wax badan. Taargooyadu waa cidhiidhi, midab huruud ah, midabkuna wuxuu sameysmaa dhibco mug leh haddii uu waxyeelo soo gaadhay. Lugta waa jaale huruud ah illaa 10cm dherer ah, gudaha banaan, oo buluug ka dhigaya nasashada.
Calaamadeynta jajabyada leh bjørk, sir iyo dhir. Goyntu waxay dhacdaa July iyo Oktoobar. Muuqaal muhiim ah ee noocyada noocan ahi waa saynisyahannadu waxay ka soo saareen maadooyin gaar ah oo kordhin kara koritaanka dhirta.
Midka ugu dhow ee la mid ah waa salmon caleenta, taas oo lagu kala soocayo casiir cad caan ah. Iyadoo ujeedada daaweyntu ay u isticmaashay awoodda difaaca bakteeriyada buluugga. In lagu kariyo, ku haboon salting, pickling, oo la kariyey ka dib pre-karkaraya.
Oak Wood (Laksiarius sulfus)
Dhirta badanaaba waxay ka kooban tahay noocyada caanka ah ee aan caadiga ahayn waxaana sidoo kale loo yaqaannaa caleemaha geedkii. Wuxuu isku daraa dhammaan calaamadaha lagu dhejiyo wuxuuna leeyahay midab casaan ama huruud ah.
Taargooyinka ka hooseeya xadka waa kuwo ballaaran oo isdaba joog ah. Cagtu waa mid cad ama casaan. Saxarka fangaska waa cufan, kareem-midab leh. Casiirka caanuhu waa caddaan, maaha mid ballaadhan, laakiin qoyan, oo la jarjiro ma badalo midabka.
Sida jilif jilicsan, noocyada noocan ah ayaa kor u qaadaya dhulka hoostiisa, sidaas awgeed waxaa lagu gartaa joogitaanka wasakhda daboolka. Waxay u dhigantaa boqoshaada si caan ah loo cuni karo.
Cunto karinta loo isticmaalo qashinka. Waxay ku koraan kaymaha noocyada ballaaran ee dhoobo leh waxayna sameyeen mycosis oo leh geedkii, hornbeam, kalluunka. Goynta ayaa dhacaysa laga bilaabo Luulyo ilaa horraantii Oktoobar.
Cows ama cirbadaha (Lactarius vellereus)
Magaca xayiraadaha ayaa la helay sababtoo ah xidhiidhka lala yeesho walxaha shisheeye, wuxuu daabacaa xayeysi caan ah. Badanaa waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dareenka. Noocan ah guljigu wuxuu u eg yahay mid si sahlan loo cuni karo, waxaana loo tixgeliyaa miisaanka ugu culus. Waxaa lagu qaybiyey Russia, Belarus. Waxay u egtahay mid cad, laakiin waxay leedahay sifooyin gaar ah.
Dhererka cabbirka ilaa 24 cm, waxaa laga yaabaa inuu helo midab jaale ah. Lugaha ilaa 7 cm ee dhererka iyo ilaa 5 cm dhexroor. Muuqaal muuqaal ah oo noocyadaas ah waa isbeddel xagga haraaga casiirka caanaha ka dib markii lagu qalajiyo caddaan illaa guduud. Jidhka cad ee jabka ayaa noqda mid cagaaran oo jaale ah. Taabbooyinka ka hooseeya xuddunta ayaa aad uga yar kuwa ka mid ah boodhka basbaaska.
Foomamka maadada mycorrhiza oo leh astaamaha iyo bjørk. Wuxuu kobciyaa kaymaha cirridka ah iyo isku dhafan ee kooxo badan. Goynta waxaa la sameeyaa laga bilaabo Agoosto ilaa Oktoobar. Marka aad cunto karisid, waxaa loo isticmaalaa salting, si kastaba ha ahaatee, noocaasi oo ah salmon ayaa noqda buluug marka la cusbaynayo. Marka dhadhanka, dhareerku wuu ka hooseeyaa cadaanka.
Ma taqaanaa? Maaddooyinka bayoolojiga firfircoon, oo ku jira dhadhanka, waxay leeyihiin: duri duri ah ee daaweynta urolithiasis; tallaabo ka hortag ah oo lagula dagaallamo qaaxada; Saameynta tallaalka; dhaqaajinta saamaynta (dhaqaajinta xasuusta, hawlaha maskaxda, dheef-shiidid); ficil-celinta caadiga ah ee daaweynta nidaamka dareenka, macaanka.
Markaad fahamto noocyada dhulalka qoyan, qof waliba waa inuu go'aan ka gaaro naftiisa: in uu sii wado caadooyinka quruumaha qaar ka mid ah oo ay ku raaxaystaan ​​dhadhankiisa ama u soo gudbiyaan boqoshaada boqoshaada aan la dabooli karin, maadaama ay ka fiirsanayaan Galbeedka.